COD-Kaalinta Bangiyada Islaamiga ah ee horumarka bulshada oo Garoowe looga hadlay. – Radio Daljir
COD-Kaalinta Bangiyada Islaamiga ah ee horumarka bulshada oo Garoowe looga hadlay.
Nofeembar 10, 2016 1:56 b 0
Garoowe, Nov 10 2016–Mid kamid ah hoteelada magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa xalay waxaa kadhacay shir muhiim ah oo siweyn loogu gorfaynayey horumarka bulshada reer Puntland gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha iyo kaalimaha bangiyada.
Shirkaan ayaa waxaa siweyn loogaga hadlayaa kaalinta ay bangiyada Islaamiga ah ka qaadan karaan horumarka guud ee bulshada gaar ahaan kuwa reer Puntland iyadoona lagu casuumey mas’uuliyiin kala duwan.
DHEGEYSO-Xaalad nolol xumo oo soo wajahday dadkii ka cararay colaada Galkacyo.